HD Video nwere ike ịbụ akụkụ nke ahịa gị Strategy | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 11, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu n'ime ndị ahịa m bụ Gbasawanye idlọ Ọrụ. Widen bụ ụlọ ọrụ dị afọ 60 nke malitere na teknụzụ prepress. N'adịghị ka ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ, Idgbasapụ adịghị eguzo ma na-ele ka mmalite na-agbasa ụlọ ọrụ ha. Kama, Widen agbanweela na ntanetị housentanetị dị ike. Ugbu a, ha na-agbanwe ụlọ ọrụ njikwa akụ dijitalụ.
O nwere ike ịbụ na ị gụọla ụfọdụ posts n’oge gara aga na igwe ojii na-akọwapụta. Ọtụtụ ihe m masịrị mbụ bịara na-arụ ọrụ BlueLock, onye ndu na teknụzụ igwe kọwaa teknụzụ ndị na-eme na-emi odude ebe a na Indianapolis.
Nsogbu: HD Video = Unaffordable Bandwit na Akụrụngwa Akwụ ụgwọ
Maka ụlọ ọrụ ndị na-agba mbọ ịbanye na vidiyo dị elu na weebụ, otu n'ime nnukwu akụrụngwa chọrọ bụ nnukwu bandwidth achọrọ iji mee ka mkpebi ahụ dị mma nye ndị na-azụ ahịa. Widen azụlitewo ụzọ abụọ dị iche iche site na iji igwe ojii na-arụ ọrụ iji jeere ihe onwunwe dijitalụ.
Embed njikọ bụ ihe dị mfe nke teknụzụ nke Widen webatara na ntanetị njikwa akụ dijitalụ ha. O nwere uru dị egwu maka ọrụ ndị ahịa maka ijikwa na ibipụta nnukwu faịlụ buru ibu dị ka onyonyo na vidiyo n'ịntanetị.
Jake Athey nke Widen nyere m ụfọdụ nghọta na nkà na ụzụ a na-akpali akpali:
Emere njikọ maka njikwa ngwa ahịa dijitalụ site na Widen nabatara igwe ojii na-akọwapụta akụ. Nke a bụ ihe n’ezie na-enye anyị ohere ịnye akụrụngwa dabara nke a. Ọzọkwa, anyị na-amata ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti ojiji nke njikọta njikọ na nke Youtube. Youtube bụ saịtị na-aga ebe a na-ebipụta vidiyo ma anyị ghọtara na dịka ụzọ kachasị mma maka ọchụchọ yana mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Teknụzụ anyị dị nnọọ iche ma na-enye atụmatụ dị iche iche bara uru. Ntọala Widen bụ otu isi ihe nchịkwa maka ijikwa ụdị dị ugbu a nke faịlụ mgbasa ozi bara ọgaranya? onyonyo, ọdịyo / vidiyo, wdg.
Nkà na ụzụ zuru ezu na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịghachite ọdịnaya ọdịnaya mgbasa ozi bara ụba n'ụdị kwesịrị ekwesị maka ọwa a ga-eji ya? ihe ọ bụla nke ahụ nwere ike ịbụ? n'ịntanetị ma ọ bụ na anọghị n'ịntanetị. Were vidiyo dịka ọmụmaatụ, sistemụ Widen na-enye gị ohere ịgbanwe vidiyo vidiyo na-agbasa ozi gaa na ntanetị kacha mma na flv ebe anyị na-ejikwa nchekwa na mgbanwe nke otu faịlụ ahụ.
Ugbu a, njikọ njikọ abanye n'ime egwuregwu mgbe ndị ahịa chọrọ igosi HD vidiyo na ntanetị ma enweghị akụrụngwa iji kwado nnukwu ọchịchọ nke ndị ọrụ na-ebudata HD video. Ndị ọrụ ahụ na-eri faịlụ vidiyo ahụ agbanweela ma nweta ya site na igwe ojii site na njikọ njikọ. Enwekwara ọtụtụ elele site na ndozi faịlụ, njikwa ikike yana akara njikwa akara.
Ikike ịgbasa, soro ma jikwaa akụrụngwa bụ nsogbu na-arịwanye elu maka ngalaba azụmaahịa ndị na-emepe emepe ma na-anwa ijikwa atụmatụ maka iji HD Video na akụ dijitalụ ndị ọzọ. Idgbasapụ na-arụ ọrụ ụfọdụ dị egwu na ụlọ ọrụ a, na-agbanwe ụlọ ọrụ ahụ n'ezie ma na-enye azịza nke ọnụ ala maka ụlọ ọrụ na-enweghị nchekwa na bandwidth niile achọrọ. Nke a bụ oke teknụzụ azụmaahịa.
Tags: klout akara